शेरबहादुरजीलाई हराउने बलियो उम्मेदवार मै हुँ : शशांक कोइराला- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
'शेरबहादुरजी पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा असफल देखिनुभएको छ ।'
'स्वतन्त्र न्यायपालिकाले यसरी हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने कस्तो न्याय देला ? राज्य प्रणाली खत्तम पार्छ ।'
'प्रचण्डको ठाउँबाट तालमेलको कुरा सोच्नु ठीक हो तर कांग्रेस निर्वाचनमा कसैसँग तालमेल गर्दैन । एक्लै लड्न सक्षम छ ।'
आश्विन २३, २०७८ कुलचन्द्र न्यौपाने
काठमाडौँ — कांग्रेसवृत्तमा पार्टी र सरकारको दुवै मोर्चाको नेतृत्वमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट पार्टीको नेतृत्व कोइराला परिवारमै फर्काउन सक्ने बलियो दाबेदारका रुपमा महामन्त्री शशांक कोइरालालाई हेरिएको छ । तर, कोइराला परिवारमै दुई जना र पौडेल समूहभित्र सभापतिका आधा दर्जन आकांक्षी रहेकाले सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्न कठिन छ ।
पार्टीको आसन्न १४ औं महाधिवेशन, सरकारका कामकारबाहीलगायत विषयमा कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले शशांक कोइरालासँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
केही जिल्लामा अझै वडा अधिवेशन हुन सकिरहेको छैन, यसले मंसिरमा हुने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रभावित बन्दैन ?
हामीले मंसिर ९–१३ कै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । त्यसभन्दा उता सार्न उपयुक्त हुँदैन तर तलका अधिवेशन नै नसकिने विशेष कारण उत्पन्न भयो भने केही समय मात्रै (पुससम्म) पछि सर्न सक्छ ।
दुई वर्षदेखि क्रियाशील सदस्यताको विवाद चलिरहेको छ । यही कारण १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । यसको भित्री कारण के हो ?
हो, क्रियाशील सदस्यताको विवाद छ । पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वडाबाट सिफारिस भएर आउनुपर्छ । हाम्रो विधानको व्यवस्था त्यही हो तर यहाँ त संस्थापन पक्षले वडामा मात्रै नभएर केन्द्रबाटै सदस्यता थपिरहेको छ । त्यस्तो गर्न त पाइँदैन नि ।
तपाईंहरूलाई संस्थापन पक्षले धाँधली गर्दै छ भन्ने शंका भएको हो ?
शंकाभन्दा पनि विधि, विधान र प्रक्रियाअनुसार सदस्यता वितरण वडाबाटै हुनुपर्छ भन्ने हो । अरू तहबाट वितरण गर्न पाइँदैन । अरू तहबाट वितरण हुन्छ भने शंका उब्जनु स्वाभाविक हो ।
कांग्रेस हुन्छु भनेर आउनेलाई सदस्यता दिँदा विवाद गर्नुपर्ने हुन्छ र ?
कांग्रेसको कार्यकर्ता हो होइन, कस्तो व्यक्ति हो भन्ने कुरा पनि केन्द्रबाट होइन वडाबाटै थाहा हुन्छ । यो जिल्लामा यो नाम गरेको कस्तो व्यक्ति हो भनेर मलाई सोध्यो भने मैले कहाँ भन्न सक्छु र ? त्यो त वडाका कार्यकर्ताले भन्न सक्छन् नि ।
कांग्रेसमा जहिल्यै सदस्यताको विवाद किन उठ्ने गर्छ ?
महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने हिसाबकिताब नै हो । शेरबहादुरजीप्रति हाम्रो अविश्वास पहिला पनि थियो, सदस्यताको विवादले अहिले झनै बढाएको छ ।
तपाईं आफैं सभापतिको उम्मेदवार बन्छु भन्दै आउनुभएको छ । तयारी कसरी अघि बढाउनुभएको छ त ?
म साथीहरूसँग कुरा गरिरहेको छु । ७७ जिल्लाकै साथीहरूसँग कुरा गर्दा ‘तपाईं खुट्टा नकमाउनुहोस्, तपाईं नै हो । अरू कसैले सक्दैन । कांग्रेसलाई परिवर्तन गर्ने हो भने तपाईंले नै नेतृत्व लिनुपर्छ’ भनेर आग्रह गरिरहेका छन ।
व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने मलाई यो झमेलामा किन म पर्नेजस्तो लाग्छ । तर, बीपीले बनाएको पार्टी हो कांग्रेस । टुलुटुलु हेरेर बस्न पनि म सक्दिनँ । पार्टीलाई एकबद्ध बनाउने, गुट उपगुट समाप्त पार्ने मेरो चाहना छ । दोस्रो, विधान संशोधन नगरी यो पार्टी चल्न सक्दैन । सभापतित्व प्रणालीमा जानुपर्छ ।
भनेपछि सभापतिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईंको जोड हो ?
हो, सभापति जित्नका लागि निर्वाचन हुन्छ । जितिसकेपछि कार्यकालभर आफ्नो विचार र दृष्टिकोणअनुसार काम गर्न सक्ने अधिकार हुनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय समितिमा सभापतिको बहुमत हुनुपर्छ ।
सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने विधानको व्यवस्था गलत भयो, अब सबै पद मनोनीत गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा हो ?
सबै भनेको होइन । उपसभापति र महामन्त्रीमा एक/एक जना चुन्ने अधिकार त सभापतिलाई हुनुपर्‍यो नि ।
यस्तो व्यवस्था त पहिला नै थियो नि ? किन संशोधन गर्नुभएको त ?
पहिलाकै व्यवस्था ठीक थियो । पछिल्लो पटक संशोधन गरियो, यो गलत भयो । धेरै प्रजातान्त्रीकरण गर्दा सभापतिलाई काम गर्नै नसक्ने खालको विधान बनाइयो । पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि यति साह्रै प्रजातान्त्रिक विधान बनाएर चल्दैन ।
सभापतिलाई बढी अधिकार दिँदा निरंकुश हुने खतरा हुन्छ भनेर संशोधन गर्नुभएको होइन र ?
निरंकुश हुन्न । सभापति भइसकेपछि पार्टी सञ्चालन गर्न सक्ने पूर्ण अधिकार सभापतिलाई हुनुपर्छ । अर्को कुरा, सभापति भनेको सरकारको कामकारबाहीमा पनि प्रभाव पार्ने पद हो । आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिन सक्छ ।
पौडेल समूहमै सभापतिका चार जना आकांक्षी छन्, चार जनामध्ये तपाईं उम्मेदवार हुने सम्भावना कति छ ?
यसो हेर्दा त न्यून छ । तैपनि हामी प्रयासमा छौं । रामचन्द्र दाइ, शेखर दाइ, प्रकाशमानजी र म गरी चार जना त हाम्रो समूहबाटै छौं । हामीलाई जसरी पनि जित्नु छ । चार जनामध्ये एक जना भए ठीक हुन्थ्यो तर हुन सक्ने सम्भावना कम छ । चार जनामध्ये सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्ति मै हुँ । ७७ जिल्लाकै पार्टी सभापति र कार्यकर्ताले तपाईं लड्नुहोस्, खुट्टा नकमाउनुहोस् भनिरहेका छन् ।
चारै जना भिड्ने अवस्था त आउँदैन होला नि ?
संख्या कम हुन्छ । दुई जनामा आउन सक्छ । एक जना नै हुने सम्भावना पनि छ तर त्यो अवस्था बनिसकेको छैन ।
शेखर कोइरालाले छाड्नुभएन भने के गर्नुहुन्छ ?
कोइराला परिवारमा हामी शेखर दा, म र सुजाता छौं । सुजाता सभापति नलड्ने भनेकी छन् । मेरो र शेखर दाको बीचमा एउटा समझदारी त हुनुपर्छ नि । पावर भनेको सेयरिङ गर्ने कुरा हो । म सभापति भएपछि शेखर दालाई के पद चाहिने हो, त्यो त म दिइहाल्छु नि । रामचन्द्र दाइ, प्रकाशमानलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा नि छ । एक जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । अर्कोलाई उपसभापति बनाउन सकिन्छ ।
शेखर र तपाईंबीचमै प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था आउँछ कि ?
त्यस्तो लाग्दैन । शेखर दाले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
शेखरले त अब छोड्ने पालो भाइको हो भन्नुभएको छ नि ?
शेखर ‘दा’ अहिले केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुनुहुन्छ । केन्द्रीय सदस्यबाट एकैचोटि सभापति बन्न उहाँलाई कठिनाइ होला । म त महामन्त्री भइसकें, सजिलो मलाई हुन्छ नि ।
उमेरको हिसाबले पनि दाइले भाइबाट आस गर्नुभएको होला नि ?
त्यस्तो तर्कले हुन्न । सभापति जित्न सक्छु भन्ने तर्कले मात्रै कन्भिन्स गर्न सकिन्छ ।
दाजुभाइलाई मिलाउने तत्त्व के छ ?
छलफल भएको छैन । परिवारमा प्रकाश (बीपीका जेठा छोरा) दाइ हुनुहुन्छ । दाइलाई शेखर दाले पनि भेट्नुहुन्छ, म नि भेट्छु । अरू साथीहरू पनि लाग्नुभएको छ ।
तपाईंको समूहमा सभापतिका आकांक्षीमध्ये बलियो मै हुँ भन्ने कसरी लाग्यो ?
अरूको तुलनामा सबैभन्दा बलियो उम्मेदवार मै हुन्छु । शेरबहादुरजी अरूसँग होइन, मसँग डराउनुभएको छ । यसले पनि को बलियो हो भन्ने थाहा हुन्छ ।
बलियो छु भन्ने आधार बीपीको छोरा भएर हो ?
होइन, विरासतको आधार एउटा पक्ष हो तर देशभरका साथीहरूको मलाई दबाब छ । तपाईं लड्नुभएन भने फेरि शेरबहादुरजीले नेतृत्व लिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ । त्यो नै मेरो ठूलो शक्ति हो । कार्यकर्ताको चाहना नै मेरो प्रेरणाको स्रोत हो । उनीहरूको प्रेरणाको कदर मैले गर्नुपर्छ ।
तीन पटक सांसद बन्दा संसद्मा मुस्किलले ७/८ पटक बोल्नुभयो । महामन्त्री भएर पनि प्रभावकारी काम गर्न सक्नुभएन । अब कसरी सभापति चलाउनुहोला भन्ने टीकाटिप्पणी कार्यकर्ताले गरेका छन् नि ?
शेरबहादुरजीको विरोध मैले सुरुदेखि गर्न थालेको भए पार्टी ध्वस्त हुने अवस्था थियो । ०७४ को आमनिर्वाचनमा पार्टीले हार्दा सबै शेरबहादुरजीविरुद्ध खनिनुभयो । मैले मात्रै साथ दिएँ । त्यो पार्टीलाई हेरेर गरेको हो, शेरबहादुरजीलाई हेरेर होइन । मैले पनि विरोध गरेको भए पार्टी कहाँ जान्थ्यो ?
दोस्रो कुरा, संसद्मा मैले ७/८ पटक बोलेको छु । बोल्ने कुरा बोलेकै छु । आवश्यकताभन्दा बढी के बोल्नु ? पहिला हामी प्रतिपक्षमा थियौं । राम्रो बोल्ने गगन थापा, मीनेन्द्रहरू थिए । उनीहरूलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्थे । त्यसैले उनीहरू बढी बोले, मैले कम बोलें ।
सभापति देउवा पार्टीभित्र जब अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ, त्यतिबेला तपाईंले काँध थापिदिनुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?
त्यो त मैले पार्टीलाई हेरेर गरेको हो । सभापतिलाई गिराइदियो भने पार्टीको अवस्था के हुन्छ ? पार्टी कुन दिशामा जान्छ ? त्यो हेर्न म चाहन्नँ ।
देउवाले फेरि उम्मेदवार हुने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । यसप्रति तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
शेरबहादुरजीले पार्टी चलाउन नसक्नुभएको सत्य कुरा हो । शेरबहादुर देउवालाई फेरि नेतृत्व दिन हुन्न भन्ने कुरामा हाम्रा पक्षका सबै नेताहरूको समान धारणा छ । त्यसका लागि बलियो उम्मेदवार मै हुँ भन्ने लाग्छ ।
शेरबहादुर देउवाले नै तपाईंलाई अघि सार्ने सम्भावना कति छ ?
उहाँले छोड्नुहुन्न भन्ने मेरो ठम्याइ छ । हार्दै छु भन्ने लाग्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्न सक्दिनँ । तर, अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । शक्ति सबै उहाँसँग छ । हरेक दृष्टिकोणबाट अनुकूल छ । हुन त उहाँले मलाई यस पटक छोड्देऊ, त्यसपछि तिमीलाई दिन्छु भन्नुभएको छ तर त्यो ललिपप देखाएको मात्रै हो । उहाँलाई डर नै मसँग छ । अरू कोहीसँग छैन ।
तपाईंसँग किन डराउनुभएको ?
अरूभन्दा बलियो छ, यो उठ्यो भने समस्या हुन्छ भनेरै होला ।
तपाईंहरूको समूहबाट धेरै उम्मेदवार हुनासाथ देउवालाई सजिलो हुँदैन र ?
त्यसैले त मैले भरसक एक जना मात्रै उम्मेदवार बन्नुपर्छ । हामी एक भयौं भने शेरबहादुरजीलाई रोक्न सक्छौं ।
तपाईं, प्रकाशमान र विमलेन्द्रबीच गठबन्धनको पहल पनि भइरहेको छ । यो कत्तिको सम्भव छ ?
हामी प्रयत्न गरिरहेका छौं तर अहिलेसम्म तीनै जनाले छोड्ने कुरा भएको छैन । मलाई सभापतिमा सहयोग गर्नुहोस्, अरू पदमा बाँडफाँड गरेर जानुपर्छ भनेर मैले भनेको छु । तीन जनाबीचको छलफलमा पनि ‘पावर सेयरिङ’ को कुरा उठाएको छु । तर, तीनै जनाबीच कसले छोड्ने भन्नेमा समझदारी हुन सकेको छैन ।
मिल्ने सम्भावना कति छ ?
प्रयास हुँदै छ । मिल्दा ठूलो सन्देश पनि दिन्छ । देउवा र पौडेलको पुस्ताबाट नेतृत्व सर्नुपर्छ भन्नेमा हामीबीच एउटै धारणा छ ।
तपाईंको उम्मेदवारीको औपचारिक घोषणा कहिले हुन्छ त ?
तपाईंको मिडियाबाट गइहाल्यो । अरू साथीहरूसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । रामचन्द्र दाइ, प्रकाशमानजी र शेखरदासँग पनि कुरा गर्छु । सबैसँग छलफल गरेरै घोषणा गर्ने हो ।
तपाईंलाई धेरै मान्छेले धार्मिक एजेन्डासँग जोडेर पनि हेर्छन् । अबको महाधिवेशनमा हिन्दु राज्य स्थापनाको एजेन्डा बनाउँदै हुनुहुन्छ भनिन्छ । साँचो हो ?
हाम्रो पार्टीको चारतारे झन्डामध्ये एउटा ताराको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रता हो । धर्मनिरपेक्षता भनेर हामीले ल्याएका थिएनौं । कहाँबाट घुसाइयो । यही कुरा मैले सुशील दालाई पनि भनेको थिएँ । उहाँले पनि पछि परिवर्तन गर्नुपर्छ, अहिले नबोल भन्नुहुन्थ्यो । बीपीले पनि धर्म स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो ।
मैले जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट तीन/तीन पटक जितें, त्यो हिन्दु आस्था राख्ने धार्मिक व्यक्तिहरू बढी भएको क्षेत्र हो । मठमन्दिरमा पुगेर भाषण गर्नुपर्थ्यो, त्यतिबेला बोल्दा हिन्दु राष्ट्र र धर्मलाई निरपेक्ष राख्न नहुने सन्दर्भ मैले उठाउँदै आएको हुँ ।
महाधिवेशनमा धर्मलाई एजेन्डा बनाउने सम्भावना कति छ ?
दुई वर्षअघि सम्पन्न महासमिति बैठकमै सात सय सदस्यले धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर बुझाएका थिए । यस पटक झन् तीव्र गतिमा उठ्ने म देख्छु । त्यसलाई मैले नै उठाउँछु । आवश्यक परे मै नेतृत्व लिन्छु ।
संविधानमै धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न कि जनमत संग्रह हुनुपर्‍यो कि त संविधान संशोधन गर्न सक्नुपर्छ । तपाईंको बाटो कुन हो ?
दुवै बाटोबाट गर्न सकिन्छ । जुन बाटोमा गए पनि परिणाम आउने एउटै हो ।
पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा देउवाको काम गर्ने शैलीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पार्टी चलाउन सक्नुभएन भनेर त मैले भनिनै सकें । गठबन्धन चलाउन पनि धेरै कठिनाइ छ । विभिन्न विचार र दृष्टिकोण बोकेका दललाई मिलाएर लैजान सजिलो छैन । मन्त्रिपरिष्द विस्तार गर्नमै तीन महिना लाग्यो । गठबन्धनमा विचारले होइन, लेनदेन र भागबन्डाले काम गर्छ । यसका लागि शेरबहादुरजीले धेरै खेलिरहनुभएको छ । तर, सरकार कामयाब हुन सकेको छैन । सरकार सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट दृष्टिकोण पनि बनाउन सक्नुभएन ।
सरकारलाई महाधिवेशनको हिसाबकिताबमा चलाउन खोजेको पनि भन्छन् नि ?
हुन सक्छ । उहाँ (देउवा) लाई फेरि जित्नु छ । नजित्ने भए महाधिवेशनमा ढिलाइ गर्ने, केही समय पछि धकेल्ने सम्भावना पनि छ ।
यस्तो सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
सम्भावना छ तर हामी मान्दैनौं । हाम्रो असहमतिबीच सभापतिले एकलौटी रूपमा महाधिवेशन टार्न र ढिलाइ गर्न सक्नुहुन्न ।
तीन महिनामा चल्दै गर्दा सरकार सही बाटोमै हिँडिरहेको छ जस्तो लाग्छ ?
एमालेलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्छ भन्ने मुद्दामा हामी सफल भयौं तर देउवाले पनि सरकार राम्रोसँग चलाउन सक्नुभएको छैन । मन्त्रिपरिषद् गठनमै तीन महिना बिताइनुभयो ।
बजेट पनि अध्यादेशबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अध्यादेश भनेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मात्रै आउने हो तर अहिले पनि अध्यादेशले शासन चलाउन खोजेको जस्तो देखिँदै छ । यो राम्रो होइन । शेरबहादुरजी अहिले पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा असफल देखिनुभएको छ । पछिल्लो पटक शेरबहादुरजीको अवस्था ढल्दो छ । साँच्चै भन्नुपर्दा अब फेरि पार्टी नेतृत्वमा शेरबहादुरजीलाई हेर्न कोही चाहँदैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै यतिका दिन लगाउनुमा प्रधानमन्त्री कि गठबन्धनमा सामेल दलका नेताहरूको कमजोरी हो ?
अहिले त प्रधानमन्त्रीकै कमजोरी हो । सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँसँगै छ । प्रधानमन्त्री आफैंले गठबन्धनमा सामेल दलहरूलाई तिम्रा लागि तीन वटा, तिम्रा लागि चार वटा मन्त्री लिउँ भनेर भन्न सक्नुपर्दथ्यो । सक्नुभएन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ हुनुमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भागबन्डा खोजेकाले हो भन्ने पनि छ नि ?
कति सत्य हो मलाई थाहा छैन तर हामी भन्छौं– न्यायपालिका स्वतन्त्र हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले यसरी हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने उसले कस्तो न्याय देला ? राज्य प्रणाली खत्तम पार्छ । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त बिगार्छ । यो ठीक होइन । यस्तो आउनु दुर्भाग्य हो ।
सरकारमा दलहरूको गठबन्धन कति लामो समयसम्म टिक्छ भन्ने लाग्छ ?
सरकार चलाउन सक्ने अवस्थासम्म जानुपर्छ तर निर्वाचनसम्मै गठबन्धन जाने, सिटमा तालमेल गर्ने कुरा म सम्भव देख्दिनँ । कांग्रेस निर्वाचनमा कसैसँग तालमेल गरेर जाँदैन । एक्लै चुनाव लड्छ । एक्लै लड्न सक्षम छ । ९ लाख त पार्टीका क्रियाशील सदस्य नै भइसके । हामीले अरूको सहारा लिन अब आवश्यक छैन ।
अर्ली इलेक्सनतिर जानुपर्छ भन्ने धेरै कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ नि ?
हो, यो पनि एउटा पक्ष छ । शेरबहादुरजीले मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि राम्रोसँग सरकार चलाउनुभयो भने पूरा अवधि चल्न सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यसले राम्रो पनि गर्छ । जान सकेन भने अर्ली इलेक्सनमै जानुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसका लागि अर्ली इलेक्सनमा जानुमै फाइदा छ ।
अर्ली इलेक्सनमा जान माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तयार छैन । त्यस्तो बेला कांग्रेस र एमाले मिलेर जान सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्न ?
निर्वाचनमा जाने विषयमा सहमति गर्ने कुरा बेग्लै हो । गठबन्धन सरकार चलेन भने जाने बाटो त्यही हो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बारम्बार यो गठबन्धन निर्वाचनसम्मै जान्छ भन्दै आउनुभएको छ नि ?
त्यस्तो सम्भावना छैन । प्रचण्डको भविष्य त तालमेलमै निर्भर छ । उहाँको ठाउँबाट तालमेलको कुरा सोच्नु ठीक हो तर कांग्रेसले निर्वाचनमा कोहीसँग तालमेल गर्दैन भन्ने प्रस्ट छ ।
सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली भारत भ्रमणमा छ । महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर हो कि खास कारण छन् ?
पार्टीमा छलफल भएको होइन तर यसलाई म सकारात्मक रूपमा लिन्छु । अहिले भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन । नेपालसँगकै सम्बन्धमा दरार आएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत विषयमा हाम्रो दूरी बढेको छ । शेरबहादुरजीले सम्बन्ध बढाउनका लागि गर्नुभएको यो पहल राम्रै हो ।
प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ ०७:५१
झन् पेलिए पौडेल
मन्त्रिपरिषद्‌मा रामचन्द्र पौडेललाई शशांक कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौला समान हिस्सा
आश्विन २३, २०७८ कलेन्द्र सेजुवाल
काठमाडौँ — कांग्रेसको भागमा ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री परेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्तिमा तीन मन्त्री आफ्नो समूहले पाउने आस गरेका थिए । यसका लागि उनले शुक्रबार बिहानसम्म प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब जारी राखेका थिए । आफ्नो समूहका महामन्त्री शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंह समूहलाई सन्तुलनमा राख्न पनि उनीसामु ३ मन्त्री ल्याउनैपर्ने बाध्यता थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवाले २ मात्र मन्त्री दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारपछि पौडेलले उदेकलाग्दो प्रतिक्रिया दिए, ‘सबै कुरा स्पष्टै छ, मेरो यसमा कुनै कमेन्ट छैन ।’
देउवाले भने पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई समेत ४० प्रतिशतबाटै दिने गरेका छन् । देउवाले यसपटक अझ अघि बढेर पौडेललाई शशांक कोइराला र सिटौला समान हिस्सा दिएका छन् । दुईमात्र मन्त्रालय पाएपछि पौडेल समूहको आन्तरिक र देउवासँगको बैठकमा समेत पौडेल, कोइराला र सिंहले आ–आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन लबिइङ गरेका थिए । अन्ततः पौडेलको प्रस्तावमा बडू र कोइरालाको प्रस्तावमा रिजाल मन्त्री भए । सिंहले आफ्नो समूहका साथै प्रधानमन्त्री देउवासँग बार्ता गर्दा पनि राजन केसीलाई मन्त्री बनाउन सकेनन् । सिंह प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि फौडेलसँग बढी त्रुद्ध भएको उनीनिकट एक नेताले बताए । अर्कातर्फ मन्त्री बन्न नपाउँदा नेतृ सुजाता कोइराला पनि आफ्नै समूहसँग रुष्ट छिन् ।
पौडेल मन्त्रिपरिषद्मा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट आउन लागेका कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई पनि रोक्न चाहन्थे । श्रेष्ठले २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गरेकाले मात्र नभई पौडेल र श्रेष्ठबीच गृहजिल्ला तनहुँमा ठूलो द्वन्द्व छ । २०७७ मंसिरमा बल्दीखोला पुल उद्घाटन गर्न गएका पौडेललाई श्रेष्ठले अवरोध पुर्‍याउन खोज्दा लफडा भएको थियो । श्रेष्ठलाई लक्ष्य गर्दै पौडेल समूहका नेता महतले ‘सरकारमा उपयुक्त मान्छे नआएको’ बताए । पौडेल पेलिनुमा देउवालाई गठबन्धन दलका नेताको सहयोग पनि कारक बनेको छ । देउवानिकट एक नेताका अनुसार नेताहरूको बैठकमा पौडेलले ३ मन्त्रालय नपाए सरकारमा जानेको नाम नपठाउने भनेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उनलाई सम्झाउँदै भनेका थिए, ‘हामी कसैले कल्पनै नगरेको अवस्थामा सरकार बनेको छ, यस्तो बेला ठूलो भाग नखोजौं, जेजति हुन्छ चित्त बुझाएर सरकारलाई सहयाग गरौं ।’
प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ ०७:४३